Mozilla Inosheedzera Nyowani Shanduro yeWebThings Gateway 0.10, Gedhi re Smart Smart uye IoT Midziyo | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla yakaburitsa vhezheni itsva yeWebThings Gateway 0.10 iyo, yakasanganiswa neWebThings Sisitimu raibhurari iyo WebThings chikuva kupa mukana wekusiyana kwezvikamu zvezvishandiso zvevatengi uye kushandisa iyo yepasirose Web Zvinhu API kuronga kudyidzana navo.
Unogona kushandisa ZigBee uye ZWave protocols, WiFi kana kubatana kwakananga kuburikidza neGPIO kusangana neIoT mapuratifomu. Firmware Gateway yakagadzirira mhando dzakasiyana dzeRaspberry Pi, Mapakeji eOverWrt neDebian aripowo.
1 Main nyowani maficha eWebThings Gateway 0.10
Main nyowani maficha eWebThings Gateway 0.10
Mune ino vhezheni itsva yeWebThings Gateway akawedzera rutsigiro rwe smart thermostats inoshandiswa kudzora tembiricha yekamuri.
Mhando dzakatsigirwa dzinosanganisira thermostat Zigbee Zen, Centralite HA 3156105 uye Z-Wave Honeywell TH8320ZW1000. Kuburikidza newebhu webhusaiti yakapihwa nepuratifomu, unogona uri kure kudzora tembiricha iri mumba, Seta iyo yekudziya kana yekutonhora nzira, uye chinja chakanangwa tembiricha.
Uyewo mitemo inogona kugadzirwa inopindura shanduko mukushisa, semuenzaniso, inosanganisira yekudziya kana yekugadzirisa mweya mudziyo kana mimwe miganho yekushisa yasvika kana zvine chekuita nenguva yezuva.
Wakawedzera kugona kudzora smart kukiya inotsigira iyo Zigbee kana Z-Wave protocol, senge Yale YRD226 Deadbolt uye Yale YRD110 Deadbolt. Paunenge uri kure nemusha, mushandisi anogona kuve nechokwadi chekuti havana kukanganwa kuvhara musuwo uye, kana zvichidikanwa, kuvhura kana kuvhara kiyi iri kure. Nekuisa iyo mirau, unogona kuita musuwo wekukiya musuwo pane imwe nguva kana kutumira ziviso kana kiyi inoramba yakavhurika.
Imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi nyowani mhando nyowani yekuwedzera ma-on wedzera kugona kwemushandisi interface.
Semuenzaniso, nerubatsiro rwema plugins, zvikamu zvitsva zvinogona kuwedzerwa kumenyu huru kana shandisa masikirini matsva nekuwedzera mashandiro. Zvekugadzira zvinowedzerwa, fomati nyowani yekuratidzira faira inokurudzirwa, yakagadzirwa neanofananidza nebrowser yekuwedzera-pane inoratidza zvinoenderana neWebExtensions tekinoroji.
Yakawedzerwa chikamu chitsva chekumisikidza chakatsaurirwa kunzvimbo dzekugara. Mushandisi ikozvino unogona kusarudza nyika, nguva yenguva uye mutauro pane main web interface, uye iyi marongero anozotariswa mumapulagini ese nemitemo inoshandiswa pakugadzirisa data rinoenderana nenzvimbo, senge mamiriro ekunze, kubuda kwezuva, kunyura kwezuva, uye ruzivo rwemvura.
Semuenzaniso, mitemo ine muganhu wenguva inozotarisa kushandurwa kwemaawa kuita zhizha kana nguva yechando, uye muiyo interface tembiricha inozoratidzwa muzvikamu zvakajairika zvekuchinja.
Yakawedzerwawo iko kugona kuwana ese ewebhu API mapuratifomu kuburikidza neWebSocket kubatana (yaimbodiwa kuvhura kubatana kwakabatana kwega kifaa). Iyo Webhu Thing Protocol Nharaunda Boka rakagadzirwa muW3C Consortium, iyo ichaenzanisa iyo WebSocket-based protocol yekudyidzana neWebhu yezvinhu zvishandiso.
Iyo inotevera vhezheni inotarisirwa kubatanidza izwi kudzora rutsigiro uchishandisa Mycroft zvishandiso uye kushandisa nzira nyowani dzekumisikidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mozilla yakazivisa vhezheni itsva yeWebThings Gateway 0.10, Gateway ye Smart Home neIoT zvishandiso
Uye maitiro ekuisa muOverWrt?